Umshini wokufakelwa womshini weplastiki womshini wepulasitiki usetshenziselwa kakhulu ukukhiqiza i-PET, PP, i-monofilament ye-Pe izosetshenziselwa ukwenza imishanelo ehlukene yokuhlanza epulasitiki yomibili ukusetshenziswa kwezimboni nakwezomphakathi.
Umshini wokuphrinta wefasitela weplastiki waziwa ngokuthi umshini wokukhiqiza opulasitiki wezinhlobo ezixubile zezinhlobonhlobo zokuxubha zombili ngokusetshenziswa kwezimboni nokusetshenziswa komphakathi. Ukusebenza komugqa womshini kulula futhi ibanga elizenzakalelayo liphezulu, kuyamukelwa emakethe yomhlaba wonke.
Umshini wentambo wensimbi weplastiki owenziwa ngentambo ulayini wokukhiqiza ozenzakalelayo wePET, PP, i-monofilament ye-PE esetshenziselwa ukukhiqiza izinhlobo ezahlukene zomkhiqizo wezintambo wepulasitiki.
Umshini wokufakelwa wezinwele owenziwe ngeplastiki wokwenza umugqa wokukhiqiza we-PET yokwenziwa, i-PP hair wig ezosetshenziselwa izinhlobo ezahlukahlukene zezitayela zezinwele, imikhiqizo yesitayela se-wig.
Umshini wokufakelwa okwenziwe ngeplastiki wePulastiki PBT uyathandwa ekukhiqizeni i-fiber yokufakelwa eyelashes yamanga ngokuzenzakalelayo. Ngenxa yekhwalithi ephezulu ye-fake eyelash filament yokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu, lo mzila womshini wenkampani yethu usesimweni esihle kakhulu sokuhola kulo mkhakha.
I-Plastic PBT PET ye-cosmetic brashi ye-Plast yezimonyo esetshenziselwa ukukhiqiza umshini wekhwalithi ephezulu ozosetshenziswa ukwenza ibhulashi yezimonyo, ibhulashi yokuhlobisa, ibhulashi lomculi, imikhiqizo yokuxubha umdwebo.
Umshini wokuphrinta wezinyo weplastiki weplastiki usetshenziswa kabanzi ukukhiqiza i-PBT, PA nylon, i-PP monofilament yemikhiqizo yamazinyo ngokuzenzakalelayo.
Umshini wefrash weplastiki weplastiki weplastiki ungakhiqiza ifektri ehlukile yokwenza izinto zokwenziwa yokwenza izinhlobo ezihlukile zokuxubha ibhulashi lokupenda. Izinto zokwakha imvamisa yi-PBT, PET ne-PA Nylon.
Ulayini womshini wokuphepha weplastiki wenkampani yethu ukhiqiza umkhiqizo wekhwalithi ephezulu ye-Pe, i-PET monofilament yezokuphepha, inethi yezinambuzane ezinobuhlungu, inetha lokufakazela uthuli, imikhiqizo ye-sunthunzi net.
Umshini wokudoba owenziwe ngeplastiki wensimbi epulasitiki usetshenziselwa kakhulu ukukhiqiza i-PE, i-PA Nylon monofilament ezosetshenziselwa ukwenza imikhiqizo ehlukahlukene yokudoba.
Umshini wokuphrinta wePlastic PA Nylon usetshenziswa kabanzi ukukhiqiza i-PA Nylon monofilament ezosetshenziselwa ukwenza imikhiqizo ehlukahlukene, njengebrashi yamazinyo, ibhulashi lokupenda, namabhulashi ahlukahlukene, inetha lokudoba eliphakeme, i-mesh yokuhlunga, intambo yeNylon, ikhebula lasolwandle njll.
Umshini we-Plast PET wire extruding usetshenziselwa kakhulu ukukhiqiza i-PET wire wire ezosetshenziswa kabanzi embonini yezolimo, imboni yokufuya, imboni yezamanzi njll.